IVivo Z5x: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IVivo ngoku ihlaziya uluhlu lwayo lweefowuni. Umenzi waseTshayina usishiyile ngeemodeli ezininzi kwezi veki, zinje iprojekti yeS1 okanye Z3x, iimodeli ngaphakathi kuluhlu oluphakathi. Ukongeza, kwezi veki bekukho ukuvuza okuthile malunga ne-smartphone entsha yohlobo, eya kuba yeyokuqala kwinxalenye yayo. ukuba nomngxuma kwiscreen. Ifowuni esele isemthethweni, iVivo Z5x.
Sele siyazi ngokusesikweni le Vivo Z5x. Sifumana ifowuni ukuba isungula ngaphakathi kwepremiyamu yomvelisi phakathi kuluhlu IsiTshayina, icandelo abasishiye kulo ngeemodeli ezininzi ukuza kuthi ga ngoku. Ke kule ngqiqo ishiya neemvakalelo ezilungileyo.
Uhlobo lwentengiso lusebenzise kakhulu ikhamera yangaphambili enokurhoxiswa kakhulu kwiifowuni zayo. Sele sikwazi ukuyibona kwiifowuni ezininzi ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa ngoku basibonisa into entsha ngaphakathi kwikhathalogu yabo ngale ndlela, kunye nefowuni yokuqala efika nomngxunya kwiscreen. Utshintsho olubalulekileyo kwinkampani.
1 Iinkcukacha zeVivo Z5x
Iinkcukacha zeVivo Z5x
Ngokuqinisekileyo le yinto eyahlula le Vivo Z5x Zezinye iifowuni ngaphakathi kwikhathalogu yomenzi. Uyilo lwangoku, olukhusela ukusebenzisa inotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi, esilibona kakhulu. Kodwa kwangaxeshanye ivumela ukusetyenziswa kakuhle kwescreen. Oku kukucaciswa kwefowuni:
Isikrini: i-intshi ye-6,53 ene-19,5: umlinganiso we-9 kunye nesisombululo se-FullHD + (2.340 x 1080 pixels)
I-RAM: 4GB / 6GB / 8GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 64GB / 128GB (iyandiswa nge-SD encinci ukuya kuthi ga kwi-256GB)
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie eneFuntouch OS 9
Ikhamera esemva: 16 MP + 8 MP + 2 MP
Ikhamera yangaphambili: 16 MP nge f / 2.0 ukuvula
Ibhetri: 5.000 mAh ene-18 W ekhawulezayo
Ukunxibelelana: IBluetooth, iDual SIM, iWiFi 802.11 a / c, GPS,
Abanye: Umfundi ongasemva weminwe
Imilinganiselo: 162.39 x 77.33 x 8.85 mm
Ubunzima: 204,1 iigrem
IVivo Z5x ifika nescreen esikhulu, ii-intshi ze-6,53. Ubukho bomngxunya kuwo buvumela ukusetyenziswa kakuhle ngaphambili kwe-90,77%. Ngaphakathi sifumana i-Snapdragon 710 njengeprosesa, eseseyona ukubheja ithandwayo phakathi kwabavelisi beefowuni kweli candelo lentengiso. Apho kuyothusa kukudityaniswa kwe-RAM kunye nokugcinwa, ukuze wonke umntu akhethe leyo ayifunayo.
Kwiikhamera, njengoko sibona okuninzi kuluhlu oluphakathi lwangoku, Sifumana ikhamera ngasemva kathathu. Umdibaniso we-16 + 8 + 2 MP sensors. Ilandela ngale ndlela ezinye iimodeli zebrendi ngokwalo. Umphambili yikhamera enye, i-16 MP kule meko. Ibhetri yenye into ebalulekileyo kule modeli, kuba inkampani isebenzisa ibhetri ye-5.000 mAh. Umthamo olungileyo, othembisa ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Ngokukodwa ngokudibanisa ne-Android Pie kunye neprosesa kufuneka inike ukusebenza okuhle.
Njengoko kuhlala kunjalo kula matyala, kukwaziswa kuphela ifowuni e-China. IVivo Z5x isungulwe ngokusesikweni kwilizwe laseAsia nge-1 kaJuni. Nangona ungabhukisha ngoku kwiwebhusayithi yenkampani. Akukho ndaba malunga nokumiliselwa kwayo kwilizwe jikelele, nangona kungenakulindeleka ukuba iphehlelelwe. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba uphawu aluhlali luthengisa kakhulu eYurophu. Kodwa silindele iindaba ezivela kuwe.
Isixhobo sikhutshwa ngemibala emithathu eyahlukeneyo, eyi: Ubusuku obuMnyama oMnyama, iPhantom emnyama kunye neAurora (Elokugqibela lijoyina imeko yemibala yegradient). Apho bothuka khona kakhulu ziinguqulelo ezine esizifumana kwi-RAM kunye nokugcinwa. Amaxabiso ezi nguqulo zeVivo Z5x ngala:
Imodeli ene-4 GB / 64 GB ixabisa i-1.398 yuan (malunga ne-180 ye-euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ye-6GB / 64GB yefowuni inexabiso nge-1.498 yuan (malunga ne-194 ye-euro yokutshintsha)
Imodeli ene-6 GB / 128 GB ixabisa i-1.698 yuan (malunga ne-220 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-8 GB / 128 GB inexabiso nge-1.998 yuan (malunga ne-259 euro kutshintsho)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IVivo Z5x: Ifowuni yophawu yokuqala enomngxunya kwiscreen